Iwe unogona kundiudza here kuti ndotengesa zvakadini backlinks kuwebsite yangu yekurwisana?
Mazuva ano, kune nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana paunogona kutengesa zvakakosha kumashure kwewebsite yako - kutanga kumushanyi wekutumira uye kugovera vatengesi vekuvaka, kuvhara zvizere SEO kana Dhizinesi dzeDhizimisi dzeDhizimusi. Zvechokwadi, zvakapiwa kuti haugoni kuisa webhusaiti yako yekurwisana nega. Kunyange zvakadaro, kakawanda masangano akadaro nemakambani, kwete kutaura avo vanoziva kuti vangatengesa zvakadini backlinks pamutengo unobatsira, zvingavewo zvakanyanya kuwedzererwa. Ndiri kureva kuti kusaremekedza nyaya huru yewebsite, uye zvichida chero rutivi rwebhizimusi rekutsvaga, vazhinji vavo vari kungoedza kucheka matheji chaiwo emari pamutengo wehutano hwavo hwebasa. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kuziva hako chete kuti utenge zvakakosha backlinks asi kuti uzive tambo dzose dzekuwana zvakakodzera kukwidzi rako rekushanyirwa.
Kudzokera kumashure, ngatitarisane nayo - hutano hwemashure hunofanira kurondedzerwa sehubatanidza nemasayithi chaiwo, ane chikwata chepamusoro PageRank uye chiremera chemasimba, uyewo zvakakwana , nheyo yakasimba pamasangano ehupfumi, uye peji yakanaka yakagadzirwa. Pashure pezvose, hatisi kuzotarisana nemhando ipi neipi yePBN, chaiko? Nenzira iyo, pasi apa ndichaenda kunokuratidza kuti ingatengesa zvakadini backlinks yewebsite yekutenderera nemitemo mitatu yakasiyana - kutarisa midrange yefambiro yekufamba, kutora maoko-pamusoro pezviito, nekutanga mazita ekubvunzurudza pamahombekombe makuru ekufamba.
Kutsvaga Midrange Travel Sources
Chokutanga uye chinonyanya kukosha, ndinopa nzira yekuwana nzvimbo dzekufambisa ye midrange, nokuti basa rako rekufambisa rinowanzosarudzwa nenzvimbo huru - hazvingaiti kubvuma mubhadharo wako mukutsinhanisa ne backlink. Saka, ndinokurudzira kutarisa midrange inobatanidza nekambani yekufambisa-kungoshandisa Google kutsvaga kuziva nheyo yekutaura yakakodzera, kunzwisisa mazano emunharaunda nemamiriro ezvinhu, shanda pakutumira ma "emafresi" emafaira aya, uye pakupedzisira uwane zvinyorwa zvako zvakatumirwa kuti uve backlink in return. Kana ini, ndakashandisa tsananguro yekutsvaga se "nzvimbo": "mushanyi" "inoteverwa nemashoko makuru anokosha mazwi. Iwe unogonawo kutsvaga "nyora kwatiri" uye tungamirirwa zvakananga kunzvimbo yakarurama.
Ndinoreva pano iwe unofanira kutevera chirongwa chechiito chakaita sechinhu ichi. Chokutanga pane zvose, gadzira runyora rwemawebsite unofunga kuti ndiwo anonyanya kufarira kuendesa vatenzi. Chechipiri, zadza fomu yega yega yega uye kutumira shoko kumunhu mumwe nomumwe anovimbisa. Chechitatu, iwe uchafanira kushandisa imwe nguva mukudzidza zvose ins uye kunze kwezvimwe zvakasiyana-siyana. Pashure pezvose, paunosvika pachigamba, usanonoka kuita chivimbiso - kupa blogger tsanangudzo chaiyo yeedza yako yekuwana SEO backlinks. Kuita kudaro, vazhinji vevablogi vanozokupa nematengo emutengo wavo - zvose zvinoreva bhizinesi, handizvo here?
Kutanga Vatendi Mabhogi paZvikwata Blogs
Ngatitarisei - nhamo, haasi munhu wose munyori akanaka nenzira yakasikwa. Kana iwe unogonawo kunzwa sokuti hauna nguva yekuenda uye kunyora zvakagadzirwa zvepamusoro kune mamwe mazita ekufamba ma blogs. Kana zvichiitika saizvozvo, mhinduro yako chete ndeyekutora maoko akabhadharwa. Zvechokwadi, iwe uchafanirwa kubhadhara izvo, asi kuhaya kunyange nyanzvi imwe nyanzvi yemunyori anogona kuve yeruponeso rwechokwadi rwevakomana vose vachiri kutarisa kuti vatenge zvakadini backlinks nevakashamwaridzana nevaridzi. Kutaura zvazviri, kubhadhara chikamu chikuru uye kuchitumira kumafiggi ekufambisa kana chero ipi zvayo inofarira mumhizha yako inoreva kuti zvese zvinenge zvatoitika kwauri. Panguva ino, chinhu bedzi chakasara nokuda kwekunyatsocherechedza ndechokuti uwane hukama hwakanaka. Nenzira iyo, usakanganwa kushanda zvakajeka paanchor yako maitiro epamusoro - zvichengetedze zvakasikwa kubvira pakutanga uye zvisati zvaitika Source . Rombo rakanaka!